Nlekọta ọrụ na Dubai C-Level bụghị naanị maka Expats
Nwere ike 6, 2018
Dubai blog maka ọhụrụ expats na Dubai
Nwere ike 16, 2018
Ọrụ nchịkwa na Dubai
Ọrụ nchịkwa na Dubai abụghị naanị maka ndị na-achọta. Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a enyere ndi oru aka itinye na UAE. Ndị otu anyị achịkwaala ntuziaka maka ọrụ na Dubai maka ndị njikwa. Ọ kachasị maka ndị isi nchịkwa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ zuru oke na United Arab Emirates. Legodị ndụmọdụ ole na ole, chọpụta ebe kacha mma maka ịchọta ọrụ nrọ n'èzí.
Anyị edeela ọrụ kachasị mma ị ga - enweta na UAE. Na n'ezie, ndị kasị mma bụ Ọkwá ma ọ bụ ọrụ nlekọta ndị isi. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-eduzi ndị mba ọzọ ka ha nweta ụdị ọrụ ahụ na-enye. N'akụkụ aka nke ọzọ, Kedu ụdị ọrụ nke ahụ bụ?. Ma otu esi ejikwa uche zuru oke maka ọrụ ndị a na-enye ?. Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ aka. Gini mere ị gụla nduzi anyị. Ị nwere ike ịchọta ezigbo ụlọ ọrụ dị n'okpuru. Ha na-enwe ezigbo ọrụ na Dubai na mba Gulf.
Companylọ ọrụ anyị na-elekarị anya ka ọ na-agwa okwu nyere gị aka ịghọ onye isi nchịkwa na UAE. N'aka nke ọzọ, anyị na-enyere ndị si mba ọzọ aka inweta ọrụ ngwa ngwa ha na-eche. Site na ntuziaka a, ị ga-eme ya chọta ezi ozi banyere nbudata. N'oge a, mba Middle East na Gulf bụ a ebe kachasị elu maka ndị na-achọ ọrụ. Karịsịa na ndị isi gụrụ akwụkwọ nke nwere MBA na agụmakwụkwọ nchịkwa azụmaahịa. Yabụ lee anya n'okpuru, kedu can nwere ike iji ntuziaka anyị.
CEO ọrụ na Dubai
Inwe ọkwá dị elu mgbe niile ka mma ?. Ọnọdụ CEO bụ agụụ, ọ bụghị ọrụ. Nke a bụ mkparịta ụka iji bụrụ onye isi nchịkwa ma ọ bụ na ọ bụghị ?. Imirikiti ndị njikwa na ọkwa dị n'etiti na-ekpebi ma ịchụso ọrụ n'ọfịs onyeisi ochel. Ọrụ CEO bụ maka ndị nwere MBA agụmakwụkwọ na ndị nwere PhD. N'ihi nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ. Maa ha niile nwere CEO. Ya mere, ụlọ ọrụ ndị na-ajụ ndị ọrụ na-atụ anya ọrụ karịa ndị isi ọrụ. E nweghị ebe niile eziokwu na blog Dubai a, na ndị mmadụ amaghị mgbe ọ ga-abụ onye ndu kacha mma.
Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị na-eme njem na Middle East na-eme nyocha nyochaa ụgwọ ego na CEO na Dubai. Ego buru ibu na-aka mma mgbe niile? N'ezie ọ bụ ebe ọ bụ na ị na - eme mkparịta ụka a ga - enwerịrị mgbe ị na - ekpebi ma ịchụso ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere obere ma ọ bụ nke obere. Ọrụ isi ike siri ike iru, ihe na-erughị 5% nke ndị mmadụ na-achịkwa iji mee nke a.
E nweghị eziokwu zuru ụwa ọnụ gbasara CEO. Enwere uru na ọghọm ma ọ bụ họrọ site na ndị ọrụ nọọsụ ruo ọkwa elu. Ọtụtụ awa ọrụ, ahụ pụrụ iche na ikike ọgụgụ isi chọrọ. Ya mere obughi mmadu nile puru ibu onye isi oru. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha adịghị inwe akwụkwọ ozi mkpuchi nke ọma. Enwere obi ike na agụụ dị mkpa maka ọnọdụ a pụrụ iche. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-ebili n'isi ụlọ ọrụ.
Gini mere Management Ọrụ na Dubai?
Ọrụ Nlekọta Ọrụ Na-arụ ọrụ na No.1 na Dubai
N'ezie, ọrụ nchịkwa, nke bụ eziokwu, bụ ndị ka ukwuu n'ime ụlọ ọrụ buru ibu site na Abu Dhabi ka Dubai. Ọtụtụ n'ime ha nọkwa ebe ahụ maka ihe kpatara ya. Site n'inwekwu ọganihu na uto, ndị isi n'etiti. Inweta oru dika ndi isi oru. Ya na obere ụlọ ọrụ a na-aghọwanye ibu karịa oge. Mgbe ndị isi na-enweta ihe pụrụ iche uru na njirimara n'ahịa ahịa.
Ụlọ ọrụ Dubai City nwere nkọwa zuru ezu ndu maka ndị agha Algeria. Anyị atụleela ole na ole ịtụle ịchụso ọrụ dị ka onye njikwa na ọkwa onye isi. Ihe ndị dị mma maka ọrụ njikwa na Dubai bụ inweta ahụmahụ dị elu. Ị nwere ike iji ya ahụmahụ dị mma maka nyocha ọchụchọ n'ọdịnihu.
Isi ihe gbasara oru oru na Dubai bu ugwo olu. Na ọtụtụ n'ime ezigbo ọmụmụ ihe na ezigbo akara dị ka onye na-agafe. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị ọrụ ahụ ị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ onyinye. Dịka onye isi, ị ga-achọta ọrụ ogologo oge mana ị nwere ike ijikwa ezigbo njikọ. Site na ọrụ ndị bụ isi dịka ọrụ ụlọ ọrụ ruo Ọrụ MBA na UAE. Ha niile ga - enwe ike inweta onye nlekọta ndị na Middle East.
Ndozi Nduzi nke AN2 dị ka onye njikwa na Dubai
Ịbanye nnukwu ụlọ ọrụ maka ọrụ njikwa, dịka ọmụmaatụ, Ọrụ ụgbọ elu na Abu Dhabi na Dubai. O doro anya na ịghọ akụkụ nke nnukwu igwe arụ ọrụ nke guzogidere ule nke oge. N'eziokwu iji nweta ọrụ njikwa na Dubai. Ọ ga-ewe ogologo oge. Maka nke a, ìgwè anyị nwere na-eduzi ndị ọpụpụ ọhụrụ. A na-ejikarị arụ ọrụ nchịkwa kachasị elu oge.
Iji wee bụrụ onye njikwa na Dubai. Kwesiri iru ụfọdụ akara. Na ihe ndị ga - enyere gị aka ịmata ọrụ gị bụ, otú ị ga - esi arụ ọrụ gị na ngalaba gị na ụzọ doro anya maka nkwalite na-ebili ozugbo ị na-agafe n'ọnụ ụzọ. Ọ bụ ezie na ụdị ihe a abụghị ụzọ ziri ezi maka onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ na enwekwu ugwo nke nkwụsi ike, ụzọ doro anya na a haziri ahazi maka ọganihu, mgbe ahụ ụlọ ọrụ buru ibu nwere ihe ndị a na spades.
Ọzọkwa, ọpụpụ, nwanyi na achuta oru n'ulo oru Dubai. N'agbanyeghị ụdị ndụ gị. Ị ga-enwe nnukwu ohere nke ịchọta ọrụ na Middle East.
Uru Nkwekota No3 nke ịghọ onye njikwa na UAE
N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ buru ibu na-aga n'ihu bulie ego maka ego. Ya mere, enwere ohere buru ibu maka ndi ozo ndi ozo. Isi uru nke ịghọ njikwa na UAE bụ ngosipụta mba ụwa. N'ihi na ụlọ ọrụ mba dị iche iche ka mma na-enye uru dị ka mkpuchi ahụike. Ọtụtụ ogologo na mmasị n'ime nkuzi maka ndi ohuru.
Dị ka onye njikwa ukwu, ị ga nweta ugwo njem ma ọ bụ Uber. Karịa ọzụzụ ego ahụ, na ọtụtụ uru ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na nnukwu ụlọ ọrụ na-enwekarị ego buru ibu karịa obere ụlọ ọrụ. Ya mere, nke a n'uche, ụlọ ọrụ na-eme ya dị mfe maka ndị ọrụ ọhụrụ ibu onye nlere anya. N’aka nke ozo, ikwesighi igwa ugwo mmụba uru bara ụba.
N'ezie, nke a bụ ihe dị mkpa mgbe ị malitere iji ohere gị mee ihe. E nwere ọtụtụ ihe dịnụ uru maka ndị na-elekọta ego na UAE. Kedu ụdị ụlọ ọrụ na ihe dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ọnọdụ dị n'ime ebe ị ga-akwụsị ịga ndụ gị maka ọrụ C-level. Anyi aghaghi icheta ndi isi na UAE. N'ezie enwere ike ịchọta ọrụ na ebe ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Saudi Arabia, na Qatar. Yabụ ebe ọ bụ na ị ghọrọ onye isi na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Na ụwa ga-emeghere gị.
No4 Ihe ndi ozo maka mgbanwe ndi oru
Ọ bụ ezie na ọrụ gị nwere ike ịdị na ụlọ ọrụ dị iche iche na nnukwu ụlọ ọrụ. Ịchọ ọrụ dịka onye isi ma ọ bụ onye nlekọta nchịkwa nwere ike iwe oge. N'ezie, ọ dị mfe ịgbanwe ọnọdụ site na ọkwa njikwa. N'aka nke ọzọ ọtụtụ ndị na-ahụ maka etiti na-elegara anya nyochaa ebe ọrụ ọhụrụ na-ahapụghị ụlọ ọrụ kpamkpam. N’iburu nke a n’uche, gị onwe gị dịka onye ọrụ ị ga-enwe ọtụtụ ihe enwere ike igbanwe oru gi.
Ịghọ onye CEO, ị nwere ike ịga site n'ịbụ onyeisi ụlọ ahịa iji bụrụ onye njikwa ọrụ, mgbe ahụ ị na-arụ ọrụ onye nhazi na iru oru C-Level. Ma ọ bụ ọbụna ị nwere ike ịmalite dị ka onye mmepụta ihe nkiri ma bilie na-arụ ọrụ dịka onye na-arụ ọrụ dị elu. Ị ka nwere ike ịchụ nta obere maka mgbanwe ọrụ. Na-agbasi mbọ ike maka ọnọdụ dị ala ruo ọtụtụ afọ.
Maka iru eru maka mgbanwe ọrụ ịchọrọ. Ọtụtụ ikpe ga-gburugburu ọ dịkarịa ala 10 afọ iji ruo. Ma ọ bụ gbakwunyere ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ezi nzukọ. Karịa ịbụ onye a kwalitere maka njikwa ọrụ na Dubai. Nke ahụ bụ otu ihe njikwa kacha mma kwesịrị ichegbu onwe ya. N'aka nke ọzọ, ọrụ nchịkwa na Dubai karịrị ọrụ dị mfe.
Ụlọ ọrụ ọhụrụ na startups Mba5
Na-arụ ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ ọbụghị anwụ na anwụ. Agbanyeghị, ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ mbido nwere uru onwe ha. Ọmụmaatụ, ebe ị na-akwaga ụlọ ọrụ Dubai site na nmalite mmalite ruo ezi azụmahịa. Ị ga-enwe njikwa zuru oke dị ka onye nlekọta ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu. Kedu ihe ọganihu nke ngalaba ọ bụla? Na ọbụna ole mkpara gị na-eme kwa ọnwa.
Mgbe ị nwere ike ịnwale ịbanye na nnukwu ụlọ ọrụ maka ọtụtụ mba. Should ga-atụle obere ụlọ ọrụ ndị a. Ma ọ bụ ọbụlagodi nzukọ mmalite ma ọ bụ ụlọ ọrụ itinye ego maka itinye ego. Companylọ ọrụ kachasị mma maka inweta ọrụ na ụlọ ọrụ mmalite dịka njikwa bụ Angel.co. Ụlọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ n'ụwa nile !.
Ngbanwe mgbanwe nke NJNUMX C na-eme nwayọọ nwayọọ
Na-atụ anya ịghọ Executive C-Level ?. Ịrụ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ dị mma. N'akụkụ ọjọọ, site na etiti elu ruo C-larịị bụ ụzọ dị ogologo. N'ihi na ndị isi nke C-Level mgbanwe dị oke ogologo. Ikwesiri inwe ndidi, ụfọdụ mkpebi na-ewe oge 3 Afọ. Ọbụna ya na ụfọdụ ụlọ ọrụ na Dubai. Iszọ dị anya aga n'ihu maka ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ mpaghara ka ha malite na ọkwa nhazi na UAE.
Ọbụlagodi na ụlọ ọrụ ị na-arụrụ ọrụ ghere oghe maka echiche ọhụụ. Ma, i kwesiri inwe ihe mgbaru ọsọ gi. Nnọọ ezigbo ọrụ na-aga n’ihu ma kwenye na ngalaba nhazi ọkwa HR maka ịkwaga na ihe atụ ọzọ. Soro gị soro gị bulie usoro ọhụrụ. Ma gbanwee onodu gi maka ọkwa ọkwa C-Level, nkwalite ọhụrụ maka ọkwa ọhụrụ nwere ike iwe oge dị ukwuu. Ọtụtụ ndị ọgbọ ọhụrụ na United Arab Emirates ga-achọ ịhapụ akara ha na ụlọ ọrụ ahụ. Ma nke a na-ewe ọtụtụ oge, ha na-arụ ọrụ maka 5 kachasị elu ruo afọ 7.
Agbanyeghị, nke a nwere ike na-akwụ ọtọ karị ma dị mfe maka obere ụlọ ọrụ karịa nke buru ibu. Ikwesiri icheta na ebe ụlọ ọrụ a anọwo nwa oge, ọ ga-enwe ụzọ nke ya ime ihe. Ọzọkwa dị iji mee ka usoro niile ị nwere ike ịgba ọsọ ọsọ chọọ ịgagharị na nyochaa na Dubai.
Ndị na-arụ ọrụ Nsolite Na-achịkwa Na-emetụta Ọganihu Gị
Ọfọn, ndị isi na-atụ anya ịghọ ndị na-emetụta ọrịa. Mgbe ị gbara onwe gị gburugburu ezi mmadụ si n'akụkụ ụwa nile. Ihe mmetụta ndị ọzọ na - enyere gị aka ịme ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Isi okwu bụ na gị ihe mkpali maka oganihu na obi uto. Maghị etu ọ ga - esi mee ka ọrụ ndụ ghara ịba uru. N'akụkụ na-adịghị mma ọ bụghị onye njikwa ọ bụla na Dubai nwere ike ịbụ kpebisiri ike inweta ọrụ ndị isi. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ ogologo oge. Ha na-akwụkwa nnukwu ụgwọ. N'ihi na ụdị agwa a weta ogo oru aka gi.
Ebe ọ bụ na ị malitere ịrụ ọrụ na ndị nwere àgwà ọjọọ. Debe otutu oge karia otú ị siri arụ ọrụ. Mana onwe gị, dịka onye njikwa na Dubai ịkwesịrị ịghọ onye na-agbanwe mmetụta ma nwee ọdịnihu gị. N’ezie, nke ahụ ga-emetụta Ohere gị nke ibili n'ime ụlọ ọrụ. Kpọkọtanụ otu akụkọ dị mma. Mee ka ha bulie ụkpụrụ ọrụ na mbọ n'ihi na ọ dị oke mkpa. N’ezie, ọ bụrụ n’ịrụ ọrụ ụlọ gị. Ndị otu gị ma ọ bụ ngalaba gị n'okpuru nlekọta gị. Ga-ekulite gị ma ghara iweda gị ala n'oge ọ bụla.
E nwere ọtụtụ ihe dịnụ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ndi nwere ike inyere gi aka oru di uku. Ijikwa ihe ịga nke ọma gị dị n'eziokwu ihe niile gbasara ime ka onye ozo goro gi ọrụ.
Mmechi nke Management Jobs na Dubai
Ọf, ka anyị rụchaa ya, ọrụ njikwa na Dubai. Ha adịghị mfe ịchọta. Ihe ka otutu n'ime ndi choro oru choro inwe ezi ikike. Na maka ọrụ C-Level dị ka njikwa ọrụ, CEO, ndị nduzi nchịkwa. Ajuju ajuju di oke egwu. Gbanwe gburugburu ebe obibi odighi mfe. Ọbụna ịgbanwe obodo nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ na ịgaghị arụ ọrụ nke ọma. Karịsịa site na Europe or Asia dịka onye na-achọ ọrụ na Middle East.
Ya mere, ọ ka mma ịmalite arụ ọrụ nbanye. Mgbe ahụ jiri nwayọ na-aga n’ihu maka ọnọdụ onye isi etiti. Ụzọ a ọ gakwuru gị ntụkwasị obi. N'ezie n'ụlọ ọrụ dị ka Google na Facebook. N'ikwu okwu n'ozuzu, mgbe ị gafesịrị usoro ajụjụ ọnụ, ọ bụrụ na ị ga-eme họpụtara maka ọrụ dị ụtọ dị otú a. Will ga-enweta ọtụtụ ego karịa. Ma ịbanye ebe ahụ siri ike, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji nọrọ na rụọ ọrụ ruo mgbe ha buliri ha.
Mana ụlọ ọrụ Dubai City na-agba ndị mbịarambịa ume. Anyị chọrọ ka etinye gị maka ọrụ kachasị mma ị ga-enye na ọrụ nchịkwa kacha mma na Dubai. Nke a bụ ihe mere anyị ji na-emelite ọkwa blog anyị na UAE mgbe niile. N'iburu nke a n'uche, anyị na-anwale iji nyere gị aka inwe ọ happyụ n'ọrụ na Middle East. N'aka nke ọzọ, echefula ndị ahụ ụlọ ọrụ na Saudi Arabia na-akwụ ụgwọ.
Citylọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.